8 सशक्त कारणहरू किन ख्रीष्टको चाँडै आउँदै छ! | eBachan Nepali Christian Magazine
8 सशक्त कारणहरू किन ख्रीष्टको चाँडै आउँदै छ!
येशू ख्रीष्टको चाँडै फिर्ती लागि प्रमाण भारी छ। यो कुनै पनि क्षण हुन सक्छ। एक जना विद्वान्ले बस पछिल्लो केही वर्ष मा 167 converging सुराग सूची। निम्न आठ छन्:
इस्राएलको rebirth। येशूले भविष्यवाणी गरेझैं यहूदीहरूलाई ई 70 (लूका 21:24) को यहूदी-रोमी युद्ध समयमा छरिएका थिए। पनि ख्रीष्टको फिर्ती अघि उत्पन्न गर्न भविष्यवाणी, इस्राएल राष्ट्रलाई मई 14 मा, 1948. इस्राएलका भनिन्छ चमत्कारपूर्ण तरिकामा पुनर्जन्म थियो “परमेश्वरको समय घडी।” पछिल्लो 2000 साल देखि यो सबैभन्दा ठूलो चमत्कार6को इच्छा विरुद्ध फिर्ती र यहूदी राज्यको REESTABLISHMENT थियो इस्लामी राष्ट्रका। त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको भविष्यवाणी परमेश्वरको योजना थियो। इस्लामी विद्वान पनि आफ्नो सपना मा यो घटना बारे सोचे कहिल्यै। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले आफ्नो इच्छा अनुसार र मानव बुद्धि र ज्ञान को बाहिर काम गर्दछ।
नैतिकता Plummeting। अध्ययन बस मध्य शताब्दीका (: 1-42तिमोथी 3) देखि एक कठोर बिरामी देखाउन। नैतिक मानक संसार भरि तल गए। परमेश्वरको क्रोध संसारको मा झुन्डिएको छ। पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षा र Quranic शिक्षा प्रति रूपमा एक आदर्श इस्लामी राष्ट्र प्रति रूपमा संसारमा कुनै वास्तविक मसीही देश छ।
Famines, हिंसा, र युद्ध। येशूले आफ्ना फिर्ती अघि संकेत, जन्म pangs intensifying वृद्धि famines, हिंसा र युद्ध, हाम्रो ग्रह (: 6-8 मत्ती 24) को स्पष्ट चित्र देखेर रूपमा आउन बताए। पृथ्वीमा छ मान्छे को एक भोक देखि suffers। हिंसाको महामारी छ। 500 ई.पू. देखि युद्ध को एक अध्ययन भर्खरको नाटकीय वृद्धि देखाउँछ। 100 भन्दा बढी द्वन्द्व, 1990 देखि erupted अघिल्लो दशक बारे दुई पटक संख्या छन्।
भूकम्प वृद्धि। पनि भविष्यवाणी जन्म pangs (मत्ती 24: 7) रूपमा हुन।, एक हाल अध्ययन विश्वव्यापी भूकम्प मा एक नाटकीय वृद्धि बस इस्राएलको rebirth को दशक देखि, देखाउँछ 1920 र 1990, एक 70 वर्षे span बीच, 10 प्रमुख भूकम्प थिए। तर वर्ष 2005 को 1990 मा, एक 15 वर्षे span, हामी (एसोसिएटेड प्रेस) “। 13 प्रमुख भूकम्प थियो गरेको अमेरिकी जियोलोजिकल सर्वेक्षण 2000 मा देखाउँछ, विश्वव्यापी तर निरंतर 2004 मा 31.199 भूकम्प बढेर 22.256 लिपिबद्ध भूकम्प थिए। (WorldNetDaily)
यात्रा र शिक्षा विस्फोट। दोस्रो आउँदै बारे 2,500 वर्ष पहिले वर्णन दुई प्रमुख अवस्था (: 4, रहन बाइबल दानियल 12) भनेर “यात्रा र शिक्षा अत्यंत वृद्धि गरिनेछ” छन्। इतिहास सबै मा, यात्रा मा विशाल वृद्धि बस जमीन र हावा यातायात दुवै को विस्फोट संग मध्य शताब्दीका देखि आएको छ; विज्ञान र कम्प्युटर को अग्रिम संग शिक्षा, मा।
गुटहरू र अदृश को विस्फोट। नक्कली आध्यात्मिकता पौराणिक र मानिस गरे कथाहरू, शैतानले उपासना, जादूटुना, प्रकृति उपासना र नयाँ आयु आन्दोलन निम्न गुटहरू र झूटा Christs (मत्ती 24:24), मानसिक घटना, प्रेतविद्याबाट, मूर्ति पूजा, संग जताततै छ (1 तिमोथी 4: 1) । कस्तो भक्ति वा अदृश छ? हेर्नुहोस् यो वेबसाइट मा रिपोर्ट “एक भक्ति वा अदृश के छ”।
नयाँ विश्व आदेश। संसारमा वित्तीय र राजनीतिक शक्ति को वृद्धि centralization शैतानले को incarnation हुनेछ र जसले संसारको सबैभन्दा धोका हुनेछ जसले “Antichrist,” को हात मा चाँडै-आउँदै संसारमा शक्ति सिस्टम एक PRELUDE छ (दानियल 7-12, मत्ती 24:15, प्रकाश 13)। यो “जनावरको मार्क” खबरदार। यस वेब साइट मा जनावरको रिपोर्ट “को मार्क होसियार हुनुहोस्
धर्मत्यागलाई र विश्वास दुवै वृद्धि। “तिनीहरूले आफ्नो शक्ति अस्वीकार गरेका छन् हुनत, godliness एक फारम” बाइबल अन्तिम दिन, मा predicts (2 तिमोथी 3: 5)। आज, धेरै चर्च, अधर्मी अस्थायी र “राजनीतिमा सही” मान तिनीहरूलाई ठाँउ, धर्मशास्त्र र पवित्र आत्माको शक्ति को अनन्त सत्य अस्वीकार। तर पनि, परमेश्वरको आत्मा एक भविष्यवाणी outpouring विश्वव्यापी लाखौं सयौं कारण छ धेरै झूटा अगमवक्ताहरू बाहिर आउनेछ अन्तिम दिन media.During द्वारा वस्तुतः unnoticed, रेकर्ड संख्या ख्रीष्टको साँचो विश्वास गर्न आउन। त्यसैले झूटा अगमवक्ताहरूको सम्म हजारौं तिनीहरूमध्ये एक गुलाम अहमद सारा इस्लाम कडा विरोध जो Ahmediyani भक्ति को संस्थापक थियो अन्तिम 400 वर्ष समयमा देखा पर्नुभयो।
ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको उहाँलाई र हाम्रो तर्फबाट उहाँको ठूलो बलिदान आफ्नो भरोसा गर्ने सबै लागि सधैंभरि पिताको संग स्वर्ग र जीवन गर्न बाटो खोलेको छ। ख्रीष्टको चाँडै (: 13-18 1 थिस्सलोनिकी 4) आउन र पुग्न “महासङ्कष्ट” बाट आफ्ना मानिसहरूलाई उद्धार हुनेछ। उहाँले पछि शासन र उहाँले संसारमा र हरेक व्यक्ति (मत्ती 25: 31-46) न्यायकर्ता पछि earth- मा शान्ति ल्याउनेछ।
परमेश्वरको न्याय साँच्चै विद्रोह मा संसार मा आउँदै छ। उहाँले उहाँको स्वभाव इन्कार गर्न सक्दैन। पापको लागि सिद्ध श्रीमान र न्याय मांग न्यायको उहाँको गुण, जो हामी सबै दोषी छन्। (रोमी 3:23) “पाप र परमेश्वरको महिमारहित छन् जो सबै लागि”।
पापको परिणाम परमेश्वरले मृत्यु, वा अलग छ। (रोमी 6:23) “पापको ज्याला लागि मृत्यु भएको छ”। ज्याला हामी कमाउन वा योग्य कुरा हो।
तर “परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ” (1 यूहन्ना 4: 8)। “प्रेम” “न्याय” संग संघर्ष छ? उत्तर: परमेश्वरको बुद्धि परमेश्वरको पुत्र आफूलाई मा सबै हाम्रो न्याय लिन हुनेछ dilemma- मिलाप! “तर परमेश्वरले हामी अझै पापी थिए भनेर जबकि, हामीलाई तिर आफ्नै प्रेम देखाउनुहुन्छ, ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो” (रोमी 5: 8)।
परमेश्वरको न्याय भाग्न, हामी प्रत्येक, क्षमा र प्रेम उहाँको मुक्त उपहार प्राप्त पर्छ “तर परमेश्वरको मुक्त उपहार ख्रीष्ट येशूको हाम्रा प्रभु अनन्त जीवन छ” (रोमी 6:23)। एक उपहार हामी कमाउन वा योग्य छैन केहि छ।
उहाँलाई प्राप्त गर्न कसरी
कुनै पनि उपहार साटासाट मा, दातालाई र रिसीभर हुनेछ छ। परमेश्वरले पहिले नै हामीलाई उपहार, उहाँको पुत्र दिइएको छ; अब हामी उहाँलाई प्राप्त गर्नुपर्छ। (यूहन्ना 1:12) “तर जस्तै धेरै तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको छोराछोरी बन्न सही दिनुभयो, उहाँलाई ग्रहण”।
हामी विश्वास गरेर उहाँलाई पाउँछन्। “लागि अनुग्रह द्वारा तपाईं विश्वास माध्यम बचत भएको छ; र छैन आफैलाई कि, यो परमेश्वरको वरदान हो; छैन कामहरू को फलस्वरूप, कुनै एक “(: 8,9 एफिसी 2) घमन्ड गर्नुपर्छ भनेर।
हामी, (ख्रीष्ट बोल्ने) “हेर, म ढोकामा उभिन्छु अनि ढक्ढकाउँछु व्यक्तिगत निमन्त्रणा द्वारा उहाँलाई प्राप्त; कसैले मेरो सोर सुन्छन् र ढोका खोलिदिएको भने, म “उहाँलाई (प्रकाश 3:20) मा आउनेछ। के तपाईं उहाँको आवाज सुन्न गर्छन्?
“प्रभु येशू, म तपाईं परमेश्वरको छोरा छन् विश्वास र तपाईं क्रूसमा मर्नुभयो भनेर मेरो पाप अनन्त मृत्युबाट मलाई बचाउन लागि: निम्नलिखित एक सुझाव प्रार्थना छ। म मेरो जीवनको ढोका खोल्न र मेरो उद्धारकत्र्ताको र प्रभुको रूपमा तपाईं पाउँछन्। म तिमीलाई मेरो जीवन दिन। तपाईं मलाई हुन चाहनुहुन्छ कुन हुन मलाई मद्दत गर्नुहोस्। Amen। “
प्रार्थना र प्रेम
डा थमस Mathai, LL.M, M.TH पीएच.डी
Previous: प्रभु येशु ख्रीष्टको बायोडाटा
Next: मेरो मनको तर्कना…